Ity no fanambarana vaovao an'ny iPad Air 2 | Vaovao IPhone
Apple dia nanangana fanambaràna vaovao momba ny iray amin'ireo vokariny voalohany izay ahy, miaraka amin'ireo iPhones vaovao. Taorinan'ny fahadisoam-panantenana nateraka fanavaozana tsy misy ny mini iPad miaraka amin'ny taranaka fahatelo mitovy amin'izany, mamela ny iPad Air 2 ho mpanjaka tanteraka ao amin'ny faritra misy ny takelaka misy ny orinasa.
Miaraka amin'ity iPad vaovao ity, ireo izay avy any Cupertino dia te-hanazava tsara fa manohy miloka amin'ny fanaovana takelaka amin'ny hevitra madio indrindra izy ireo, tsy misy hybrida eo anelanelan'ny takelaka sy solosaina. Ary mazava ho azy fa ny fahaizan-tsaina sy ireo endri-javatra ireo no tena te hampisongadina amin'ity dokambarotra vaovao ity, izay midika fa io iPad io ihany no mahazatra, saingy tsara kokoa.
Mandritra ny fandehanany dia hitantsika ny fomba fampiasana ny iPad amin'ny toe-javatra samihafa, mampiseho azy io ho fitaovana azo entina ampiasaina amin'ny zavatra rehetra, izay fiantsoana azy rahateo. Andro vitsy lasa izay nisy namako »pro Android» nilaza tamiko fa ny iPad Air 2 dia mahagaga, fa efa nanandrana izany izy ary toy ny nanana taratasy kely teny an-tànany izy io. Mazava ho azy fa rehefa eo am-pelatananao dia rehefa tena hitanao hoe aiza ny fanavaozana an'ity vokatra ity.
Na dia toa manana toerana mazava aza i Apple amin'ny toerana itiavany hitarika ny tsenan'ny takelaka, dia mbola manana ny tsaho momba ny a iPad Pro fa afaka natomboka voalohany io ary io dia mpifaninana iray izay hahatratra ny fitaovana Windows ankehitriny izay mahazo famerenana tsara toy izany, ny Tetikasa 3. Ary, raha ny marina, heveriko fa ho dingana lôjika izany, raha tsy mahita ity amin'ny taona manaraka isika dia azo antoka fa hahita ny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Mampianatra antsika i Apple fa mahomby amin'ny iPad Air 2 amin'ny doka vaovao
Ny olon-kendry rehetra dia mahalala fa ny SurFacePro 3 dia manome tongotra 3 ho an'ireo ipad vaovao. SurFacePro3 in-arivo. Ary ireo izay tia ny vokatra Apple dia mahafantatra izany miaraka amin'ny iphone 6 plus vaovao ho an'ny iPad.
Mpampiasa android aho. Vao haingana aho no nividy ny ipad air 2 64 gb ary tsy maintsy ekeko fa ny fahamendrehana sy ny hafainganan'ny takelaka vaovao dia nahatonga ahy ho tia. Malaky, mahomby ary mahavariana ny fanodinana apk na manao ahoana na manavesatra azy. Haitra sy fanatsarana ny famokarana. Mampiasa an'io isan'andro aho any am-piasana (fanabeazana) ary tiako kokoa hatrany izany. Vokatra lafo vidy nefa manaitra ahy rehefa mandeha ny andro. Snag iray monja; mpitantana rakitra tsara, tsy maintsy nividy goodreader aho. Tena faly amin'ny fividianana. Ny mpampiasa ny nexus 4 sy 5 dia milaza aminao izany amin'ny ipad air 2.
Raha nividy ny SurFacePro 3 ianao dia tsy mila mandany vola bebe kokoa hividianana mpitantana fisie satria i Microsoft no mitondra azy ireo amin'ny alàlan'ny default. Raha manisa ny hafa ianao dia mila mividy ...
zecamil dia hoy izy:
edu, raha afa-po amin'ny surfacepro 3 ianao, inona no ataonao ao anaty forum iray miresaka momba ny ipad? Manana tsy fanarahan-dalàna ve ianao ary te hampahafantatra azy eto? Ankafizo izay anananao ary mifalia.
Salva koa dia mampiasa ny ipad amin'ny asako, fanabeazana raha tianao dia afaka mizara traikefa hanatsarana ny asanay izahay. Avy any Kolombia aho.
Mamaly an'i zecamil
Ny surfacepro 3 dia zavatra manaitaitra anao, na inona na inona ataoko mba hitondrako izany, entiko ny solosaina findainy, satria farafaharatsiny tsy tratra izany ary tokony hamono tampoka azy ianao, raha te hitondra aho dia manana ilay 6 miampy, mila asa aho fa manana mac book air, ary mijanona be dia be, ka mandany ny microsofo rehetra. Ankoatry ny fandaniana izany vola izany dia efa heloka bevava ao anatin'io fitaovana io ka taty aoriana dia nilaza izy ireo fa paoma.
Ny ipad air 2 dia mihinana ny takelaka rehetra eny an-tsena. Famboy aho amin'ny paoma (na dia manana s4 aza aho) fa tsy misy orinasa mampitaha ny vanim-potoana paoma!
Tiako ny iPad air 2 ho an'ny traikefan'ny mpampiasa ampitainy, ny fahatsorana ary ny famolavolana ny zava-drehetra. Na izany aza, tiako ihany koa ny fahalalahan'ny android. Na dia tsy fanboy an'ny rafitra fiasa aza aho dia mitazona ny tsara indrindra amin'izy roa. Tokony ho hybrid aho. TPT.
Mampiseho anay ny mety ho an'ny GarageBand ny mpampiasa raha manana tanana tsara ianao
Ahoana ny fomba hampahafantarana an'i Siri anarana sarotra tononina